Amakhasino eMicrogaming South Africa - Abahlinzeki beSoftware
Ikhaya / Abahlinzeki begeyimu / ikhasino ye-microgaming e-ningizimu afrika
Ikhasino ye-Microgaming e-Ningizimu Afrika
I-Microgaming yipulatifomu yesofthiwe yekhasino ye-inthanethi eyasungulwa ngo-1994. I-Microgaming inikeza izinhlobo eziningi zemidlalo kumakhasino e-inthanethi aphesheya. Le nkampane iphinde yakha inethiwekhi edumile ye-poker ye-MicroGaming, esetshenziswa ngamagumbi athile e-poker ye-inthanethi.
I-Micrograming ingomunye wabasunguli be-eCOGRA
Kwakunabo-opharetha bamakhasino abambalwa abangathembekile abadala izinkinga ekuqaleni kokungena kwamakhasino e-inthanethi. Abadlali bebengazi ukuthi balindeleni futhi abanye opharetha bebengenandaba nokuvikeleka noma ukuphatha abadlali ngendlela elungile. I-Micrograming ibingomunye wabahlinzeki bekhasino ye-inthanethi bokuqala abathathe izinyathelo zokulwa nabo-opharetha abangathembekile. Ndawonye nabanye abahlinzeki besofthiwe yokugembula, bathathe izinyathelo zokusungula i-eCOGRA, futhi leli gama elifingqiwe limele i- e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance.
I-Micrograming inikezela Ngemidlalo Ehlukahlukene
I-MicroGaming ingomunye wabaholi bemboni yamakhasino e-inthanethi, futhi ibhekele isofthiwe enikezwa ngamakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika afana ne-Piggs Peak Online casino kanye ne-Volcanic Gold Casino. Ngeshwa, la makhasino e-inthanethi awasamukeli abantu baseNingizimu Afrika. Ipulatifomu yesofthiwe inikeza abadlali uhlu olude lwemidlalo yasekhasino, futhi ivumela amakhasino e-inthanethi ukuthi ahlanganise kalula imidlalo emisha.
Kunamakhulu emidlalo ongakhetha kuwo futhi uba sethubeni lokuwina ama-Jackpot Akhula Njalo (Progressive Jackpots) amakhulu embonini!
Micrograming inikezela Ngesofthiwe Esezingeni Eliphezulu
Ukuhlakanipha kuhambisana nokukhula futhi njengoba i-Microgaming ingomunye wabahlinzeki bemidlalo yasekhasino, bayazazi izinto zabo. Imidlalo iklanywe ngendlela elula ukubuka futhi idlaleka kalula yize eminye yemidlalo iqukethe imidwebo kanye nemisindo emihle.